मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा ओली, १० औँ लटमा को को थपिँदैछन् ? - नागरिक रैबार
मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा ओली, १० औँ लटमा को को थपिँदैछन् ?
काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल फेरि हेरफेर हुने भएको छ । मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल १० औँ पटक विस्तार गर्न लाग्नुभएकाे हो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शपथसँगै लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
पहिलो लटमा मन्त्री बनेका दुबै जना अहिले मन्त्रिपरिषद् हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीले २ वर्षको अवधिमा मन्त्रिमण्डल ९ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भइसकेको छ । मन्त्रिमण्डल २०७४ सालमा फागुन ३, १४ र चैत १२ गते गरी ३ पटक विस्तार भएको थियो । २०७५ सालमा जेठ १८, साउन १८ र फाुगन १६ गरी ३ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ । मन्त्रिमण्डल २०७६ सालमा पनि साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ गरी ३ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले २०७५ चैत २ गते मन्त्रिमण्डल फेरि बिस्तार गनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो लटमा नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई रक्षा, स्थायी समिति सदस्य प्रदिप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा मात्रिका यादव र डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शेरबहादुर तामाङलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थ जगत विश्वकर्मालाई, युवा तथा खेलकुद, गाेकर्ण बिष्टलाई श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र गोकुल बाँस्कोटालाई संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बनाउनुभयो । त्यसबेला नियुक्त भएका, बिष्ट, यादव र बाँस्काेटा बाहेक सबै अहिले मन्त्रिपरिषदमा हुनुहुन्छ ।
कर्णाली नदीमा जीप खस्दा, चाकल बेपत्ता
दिल्लीमा भिडन्त :पाँच जनाको मृत्यु